India : Didim-Pitsaràna Iray Manafoana Ny Fanamelohana Ny Fiarahan’ny Mitovy Fananahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2018 7:44 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, عربي, English
Tamin'ny alakamisy (2 jolay 2009), namoaka didy ny fitsarana avon'i Dehli fa ny fiampangana ho heloka bevava ny firaisana ara-nofo ifanarahan'ireo mitovy fananahana dia fanavakavahana ka noho izany dia fanitsakitsahana ny zo fototra arovan'ny lalàm-panorenana indiana. Vakiantsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny valinkafatr'ireo mpitoraka bilaogy indiana izay manadihady ny vokatr'izany fanapahankevitra izany.
Ambaran’ ilay mpitoraka bilaogy Amit Varmas (amin'ny teny anglisy) ao amin'ny bilaoginy India Uncut (India tsy mitapaka) :
Andro tsara ho marihina amin'ny vato fotsy ny 2 jolay 2009, fa andro lehibe amin'ny tantaran'i India mahaleotena satria androany dia nesorin'ny Fitsarana Avon'i Dheli tsy ho isan'ny heloka bevava intsony ny fiarahan'ny mitovy fananahana. Manomboka izao izany, dia ara-dalàna ny maha-pelaka aty India. Nanoratra matetika ny resaka momba ny nahazoan'i India ny fahaleovantenany tamin'ny 1947 aho, saingy tsy mbola malalaka ny indiana amin'ny sehatra maro. Teboka iray azo ho an'ny fahafahan'ny isam-batan'olona indray izany. […] Mazava ho azy, tsy midika izany hoe avy hatrany dia ho lasa fiarahamonina misongadina isika. Mbola betsaka ny fankahalana ary tsy mitsaha-mitombo ny teniteny foana momba ny fiarahan'ny mitovy fananahana amin'ny kolontsain'ny vahoaka. Fa fara-faharatsiny efa tsy enjehin'ny lalàna intsony izy izao. Inona no ambaranareo momba izany?
Etsy andaniny, tanisain'ny bilaogy The Rational Fool ilay didy ary hoy izy :
Fandresena ho an'ny demokrasia laika any India izany. Tamin'ilay didim-pitsaràna manantantara, ny filohan'ny fitsarana avon'i Dheli, Ajit Prakash Shah, niaraka tamin'ny mpitsara S. Muralidhar dia nanome rariny ny mpangataka, ny fikambanana Naz, ary nandidy fa ny andininy faha 377 ao amin'ny lalàna famaizana indiana amin'izao endriny ankehitriny izao dia mifanohitra amin'ireo fepetra voalaza ao amin'ny andininy faha 21, 14 ary 15 ao amin'ny lalàm-panorenana ” raha manameloka ny firaisana ara-nofo ifaneken'ireo olon-dehibe manokana”. Tsy hoe ny vondrom-piarahamonina LGBT fotsiny no ampaherezin'ilay didim-pitsaràna fa izay rehetra mino ihany koa hoe tsy tokony gejain'ny finoana sy ny soatoavina tsy voahevitra mandrakizay ny fahalalahana sy ny fitoviana manoloana ny lalàna .
Namafisin'ilay vehivavy mpitoraka bilaogy Suriya Subramanian tao amin'ny bilaogy Blogbharti [ amin'ny teny anglisy] tamin'ny alàlan'ny fanehoankevitra hoe:
Tiako ny hisintona ny saina ho amin'ilay ampahany izay heveriko fa tena manandanja, nefa tsy misy miresaka. Tsy hoe fotsiny nanaisotra ny fanamelohana ny fiarahan'ny mitovy fananahana ny fitsaràna, fa nandeha lavitra kokoa tamin'ny nanomezany ny fiarovana ny tsirairay amin'ny fanavakavahana mifototra amin'ny fironana ara-pananahana.
Toy izao no nosoratan’ilay mpitoraka bilaogy Harini Calamur ao amin'ny bilaoginy POV [amin'ny teny anglisy ] :
Fotoana izao. Tsy anjaran'ny fanjakana ny mitsikilo any amin'ny efitra fandriana. Tsy resaka fanafoanana ny fanamelohana ny fiarahan'ny mitovy fananahana fotsiny ihany – fa fiantohana ny zon'ny tsirairay hanana ny tsiambaratelony ihany koa.
Raha toa ka manontany tena ao amin'ny bilaoginy This is a Title [amin'ny teny anglisy] ny mpitoraka bilaogy ??! ka milaza hoe :
Renareo ve ? izany no tabataba ataon'ilay lalàna tsy misy dikany rehefa nofoanana ihany nony farany . […] Mpitandro filaminana mpampalahelo anefa, mihena iray indray ny firaisana tsikombakomba ho an-dry zareo.
Ary ampahatsiahivin'i ??! antsika fa ny fanehoankevitra rehetra amin'ity didim-pitsaràna ity dia tsy lafy tsarany avokoa, toroana hevitra ny mpamaky hijery ny bilaogy Rediff commentboard [amin'ny teny anglisy]. Inty misy ohatra fomba fijery iray voatanisa ao, ny an'i Puneet Gera :
Voalohany teo amin'ny fiainako, na dia indiana aza aho, no manaiky fa firenena tsara kokoa noho i India i Pakistana, fara-faharatsiny voarara ny fiarahan'ny mitovy fananahana. Narovany ny soatoavina ara-kolontsaina. Miarahaba anao aho ry Pakistana noho ny soatoavinao tsara.
Faly ilay vehivavy mpitoraka bilaogy Szerelem milaza ao amin'ny bilaoginy [amin'ny teny anglisy] :
Nilazan'ilay namako vaovao aho, avy tamin'ny rahalahiny mpisolovava, fa azo ampiharina manerana ny firenena ny didy rehefa avoakan'ny fitsarana avon'i Delhi, raha tsy hoe foanan'ireo fanjakana manokana. (a) Mampahazava kokoa ilay didim-pitsaràna izany sady (b) mampanontany tena ahy raha sy rahoviana ary aiza no hanafoanana izany, fa tsy izay no hitranga, satria efa tara loatra ity fitsaràna ity. Ary koa, mbay t….tany ry mollahs isany a! , ianareo taritary avy amin'ny hery an-kavanan'ny hindutva sy ianareo tsy misy ilàna azy amin'ny ankapobeny izay mameno ny vovonan'ny adihevitra amin'ity firenena ity sy mitsikera izany.
Na izany aza, ao amin'ny bilaoginy Ultra Violet [amin'ny teny anglisy], mino ilay vehivavy mpitoraka bilaogy Dilnavaz Bamboat fa mbola betsaka ireo zavatra tsy maintsy hiadiana :
Raha tena fandresena marina ho an'ireo mankasitraka ny fironanana amin'ny fitoviana ny tsy fanamelohana ny firaisana ara-nofon'ny mitovy fananahana, dia mbola mametra ireo safidy fototra izay heverina ho toy ny loza mananontanona na dia lavitra ny sehatra sosialy aza ny fahalalàna kely momba ilay fifanarahana. Ohatra iray amin'izany ny lamba “jean”. Tsy misangy aho. Araka ny filazan'ny fikambanan'ny mpitantana Sekoly any Uttar Pradesh, ny jean angamba no fototry ny fikororosy fahan'ny fitondrantenan'ny adolantsento. Avelao hipetraka any ny lamba manga dia zay ! Manana olom-pirenena modely isika. Angamba toa samy mahaleo tena izy roa ireo, saingy maneho ady tsy mitsahatra mba hanekena ny zontsika ho afaka hanana fahafahana maneho hevitra malalaka sy safidy fototra. Ary aoka ho tsaroantsika fa mbola lavitra ny farany. Amin'ny ankapobeny, dia any amin'ny faran'ny rakibolana no misy ny “autodetermination” (fahafaha-manapakevitra samirery).
Avy amin'ny mpisera amin'ny Flickr nickjohnson ny sary haingo ‘Bangalore Gay Pride Parade‘ ary nahazoana alàlana avy amin'ny Creative Commons.